Gaar ahaanta muraayadda caadiga ah ee galaaska, Fog / Foloolka ka-hortagga wasakhda hawada, miisaska hawada Aerodynamic dhamaantood waa lagu siin karaa shirkadeena, haddii aad wax codsi ah u qabtid ka-hortagga sunta ka hortagga sunta-galalka, fadlan si xor ah noola soo xiriir. Qalabka muraayadaha indhaha Glass insulas-ka ayaa laga sameeyay galaas heerkulkiisu aad u sarreeyo, oo aan la buuxin iyo marin hawo. Waxay ku habboon yihiin khadadka-korantada sare-aera. Waxaan bixinaa qalabka daboolaya muraayadaha indhaha, iyagoo taageeraya qalabka xarkaha iyo kuwa barafka culus
Sifeynta Xirmidda fiyuuska ama fiyuuska goynta waa isku darka fiyuuska iyo badalidda, oo loo isticmaalo khadadka hore ee dusha sare iyo tuubooyinka si looga ilaaliyo transformers-yada korantada hadda taagan iyo kuwa xad-dhaafka ah. Wixii hadda ka dambeeya oo ay sabab u tahay cilad ku jirta koronto-wareega ama wareegga macaamiisha ayaa u horseedi doonta fiyuuska inuu dhalaalayo, kana joojiyo is-beddelaha khadka. Waxaa sidoo kale lagu furi karaa iyada oo la adeegsado qalabka adeegga ee dhulka taagan oo isticmaalaya usha dabool dheer oo loo yaqaan "ul kulul". Featu ...
Xaqiijinta Joogtada Joogtada ah ee Joogtada ah ee Joogtada ah waxaa ku jira 54-1, 54-2, 54-3, 54-4 iyo wixii la mid ah. Jaangooyo: IEC, ANSI, BS, AS, DIN, GB iyo iwm Midab: bunni, cawlan, buluug buluug ah iyo wixii la mid ah. Xaraashyada seeraha ee loo yaqaan 'Disc seramic insuids' waxaa loogu talagalay sida xarig, badanaa laba ama in ka badan, iyagoo bixiya difaac sare oo ka sarreeya midda kale. Xaraashka alwaaxyada loo yaqaan 'seeram disc' waxaa badanaa loo isticmaalaa munaarado fidinta-koronto-weyn, sida ka muuqata sawirka hoose. Geedo-wareedyadu waa kuwa ugu ba ...
Xawaaraha Khadka Tooska ah
Xiisadda Dhimashada Xiran
Soocidda Koronto-curiyaha, oo sidoo kale loo yaqaan 'dielectric ama nonconductor', waa walax ka hortagaysa qulqulka hadda jira. Qalabka noocan ah ee ka samaysan silicone waxaa loo isticmaalaa qaybo ka mid ah qalabka korantada loogu talagalay in lagu taageero ama lagu kala saaro qalabka korantada iyada oo aan hadda laynka. Ereyga ayaa sidoo kale si gaar ah loogu isticmaalaa si loogu tixraaco caymisyada taageeraya ee ku dhejiya fiilooyinka gudbinta korantada ee dherarka utility ama pylons. Isku-darkayaasha isku-darka ah ayaa ka jaban, si aad ah ...